Maaliif Akkan Hidhame Utuun Hin Barinan Hiikame: Ogeessa Seeraa – Kichuu
HomeNewsAfricaMaaliif Akkan Hidhame Utuun Hin Barinan Hiikame: Ogeessa Seeraa
Maaliif Akkan Hidhame Utuun Hin Barinan Hiikame: Ogeessa Seeraa
Maaliif Akkan Hidhame Utuun Hin Barinan Hiikame: Ogeessa Seeraa Hidhaa Keessa Turan
Maaliif Akkan Hidhame Utuun Hin Barinan Hiikame: Ogeessa Seeraa Hidhaa Keessa Turan(VOA afaan Oromoo) -WASHINGTON, DC — Mormii Oromiyaa fi naannoo Amaaraa keessatti ka’een mootummaan namoota jeeqama kaasan jechuun shakkaman kanneen kuma 20 ol ta’an to’annaa jala oolchuu dhaan mooraa leenjii adda addaa keessatti leenjisa kenneefii irra hedduu gad dhiisuu isaaf kaan immoo murtiitti dhiyeessuuf hidhaa keessatti hambisuu isaa ka beeksise ta’uu gabaasuun keenya ni yaadatama.
Kanneen to’annaa jala oolan keessa barsiistota, barattoota, doktoorotaa fi ogeessonni seeraa keessatti argamu. Keessummaan keenya har’aa ogeessa seeraa Dr. Mararaa Guddinaafaa dabalatee namoota 200 oliif abukaatoo ta’uun kan dhaabatan obbo Dhaabaa Cufaa ti. Dhaddacha Sadaasa 28 irra oolee waajjira kootti ennaan deebi’u humnoonni mootummaa natti marsuun na qabanii waajjira Poolisii Shawaa Lixaatti na geessan. Achittis murtiitti utuu hin dhiyaatin guyyoota kudha shaniifan hidhame. Maaliif akkan hidhame namni natti hime hin turre jedhan Obbo dhaabaan. San booda namoota kanneen biroo aanaalee Shawaa Lixaa adda addaa irraa qabaman waliin Xolaayitti of agarre jedhan.